အသက်အရွယ် 22 - ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ: ဒါဟာမကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ 16 ကတည်းက ED ။ ငါမရှိတော့တောင်မှ porn ရန်ခက်ခဲရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သာ shemale porn မှပယ် Jack မပေးနိုင်ခဲ့ပါ။ (TRIGGER သတိပေးချက်) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
အသက် ၂၂ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ငါ ၁၆ နှစ်ကတည်းက ED ။ ငါကညစ်ညမ်းရုပ်တောင်မတောင်မကြည့်နိုင်တော့ဘူး။ porn shemale မှပယ် jack ကိုနိုင်ဘူး။ (TRIGGER သတိပေးချက်)
အောင်မြင်မှု - vanilla လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အမြဲတမ်းကွန်ဒုံးနှင့်နှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အစောင့်အရှောက်ကြည့်ဖို့သွား။ အမှုအရာပူလာပြီတစ်ချိန်ကခဲယဉ်းတယ်။ ငါကွန်ဒုံးနဲ့ပါးစပ်ကိုပါးစပ်နဲ့ထိုးတယ်။ ကွန်ဒုံးကြီးကနိမိတ်လက္ခဏာကနေရှေ့ကိုမသွားခင်ငါအရမ်းခက်တယ်။ ပြီးတော့သူမအပေါ်ထိပ်ကိုရောက်သွားတယ်။ သူမကျွန်တော့်ကြက်ကိုလမ်းပြပြီး ၂ မိနစ်အတွင်းမှာပဲသူ့ကိုအတွင်းထဲထည့်လိုက်တယ်။ နောက်တစ်ခါထပ်ကြိုးစားပြီးထပ်မံကြိုးစားရန်ကျွန်ုပ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့သည်။ ဤအချိန်ကျွန်ုပ်သည် ၅ မိနစ် ၆ မိနစ်လောက်မြန်စွာမပြေးနိုင်ခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သူမ၏တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ပုံစံကိုဤတစ်ကြိမ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တဖန်သူမအတွင်း၌ထပ်မံပါဝင်ခဲ့သည်။
အဘယ်သို့ငါကဒီမှာရလာတာလဲ ငါ 90 ရက်ပေါင်းဖန်ဆင်းငါလုပ်နိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသက်သေပြခဲ့သည်အခါအမှန်တကယ်စတင်ဖြစ်ပျက်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ ဤအတူယုံကြည်မှုတို့သည် လာ. ငါ့ကိုယ်ကိုပေး၏နှင့်အများကြီးလိုအပ်ချိုးစိတ်။ ငါ သွား. တကယ်ငါ၏အဒစ်အခြို့ sensitivity ကိုဆောင်ကြဉ်းကကူညီပေးခဲ့သည့်အထဲတွင်အထူးပြုထားတဲ့အစောင့်အကြပ်ကနေ blowjob, တယ်။ တောင်မှ PIED နှင့်အတူကအသွေးသည်သင့်လိင်တံထဲသို့စို့ခံရသောအခါအခက်ခဲမရမှတော်တော်ခဲယဉ်းပါတယ်။ ငါသည်ဤ rewiring နှင့်မိန်းမနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာအတူအဆင်ပြေလာပြီစတင်ရန်ကောင်းတစ်လမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အတူတူလုပ်နေတာပိုပြီးအနည်းငယ်စောင့်အရှောက် Visited ။ ထိုအခါပြန်ရောက်သွားတယ်နှင့်မြင်းပေါ်ပြန်ရတယ်, အရေပြားအဆက်အသွယ်နဲ့ Hard ရတဲ့့ကြောင့်ခံစားစိုးရိမ်ပိုပြီးဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်အတူအဆင်ပြေနှင့်မဖြစ်လာအပေါ်အသားအရေဖို့အသုံးပြုတဲ့အနည်းငယ်အနှိပ်ခန်းသွားရောက်ခဲ့သည်။ အဆုံးမှာလက်အလုပ်အကိုင်များမှသည်ဖြစ်ချင်နိုင်ခဲ့သည်သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံအခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ်။ မြင်းအနည်းငယ်ပိုပြီးအဆချွတ်လဲကျပေမယ့်ငါ binged ဘူး။
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကလပ်အသင်းကိုထွက်သွားတယ်။ ငါက ၁ ရက်သာလမ်းလျှောက်ရုံသာဖြစ်ပြီး၊ ငါ့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတွန်းထုတ်ပြီးငါ့ရဲ့အပျော်အပါးကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးငါနဲ့အတူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အတူရှိနေခဲ့ရင်ငါကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုငါပြောပြပေမဲ့ငါသွားခဲ့တုန်းကငါ ငါကနေရတယ်အလုအယက်ကိုချစ်၏။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဗန်ထဲတွင်လမ်းပေါ်တွင်အချိန်များစွာကုန်လွန်ပြီးကျွန်ုပ်တွေ့ရသောကြက်ရှိသမျှကိုဂေါက်သီးရိုက်သည်။ ငါသည်လည်းတစ်နေ့လျှင်ကျပန်းဖောက်သည် ၂၀ ခန့်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရပြီး၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည်ပူသောအမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအခြားအစောင့်အကြပ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးလိင်သွား၏ဒါပေမယ့်စက္ကန့် 1 အတွင်းငါ့စိုက်ထူဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှရှက်ရွံ့သလိုခံစားရတယ်။ နောက် ၂ ရက်အကြာမှာတော့ငါဟာအဲဒါကို fuck ဆိုတဲ့စဉ်းစားပြီးတခြားအစောင့်အကြပ်တွေနဲ့ထပ်ကြိုးစားကြည့်လိုက်တယ်။ သူမကျွန်တော့်မျက်နှာပေါ်ကယိမ်းထိုးနေတဲ့သူမရဲ့ tits နဲ့သူမငါ့အတွေးထဲမှာအတွင်း cumming လုပ်နေတုန်းပဲဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ။
နောက်တစ်နေ့တွင် MW နှင့်အတူနိုးလာပြီးအလုပ်တွင်တစ်နေ့လုံးအလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်များပြီးခဲ့သည့်ညတွင်စဉ်းစားလာသည်။ ထို့ကြောင့်ငါသည်နည်းနည်းကြာကြာအသုံးမပြုခဲ့ပဲဤအချိန်တွင်သူမကိုအတော်လေးကောင်းသည်ဟုမှည့်ခြင်း မှလွဲ၍ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် MW မရှိ၊ အမှန်တကယ် libido မရှိသောကြောင့်နိုးလာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့် ၂ ရက်အကြာကဖြစ်သည်။ ငါတောအုပ်ထဲကမိုင်အနည်းငယ်အကွာမှာတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမယ့်ငါအလင်းမြင်နိုင်တယ်
ငါဖြစ်ကောင်းဤ site ပေါ်တွင်အဆိုးဆုံးအမှုပေါင်း 1 ဖြစ်ကောင်း, ငါမရှိတော့ porn မှခက်ခဲရနိုင်တော့မည်အထိရတယ်။ shemale porn နှင့်ထူးဆန်းသော fetish porn ကိုသာဘဝနှင့်အတူလည်းစောင့်ကြည့်အချိန်တစ်နာရီဖြုန်းလိမ့်မယ်သာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီမှာ။ တကယ်လို့သင့်ကိုငါပြန်ကောင်းလာနိုင်ရင် ၁၀၀% လုပ်နိုင်တယ်။ မင်းပြောတာဘာမှမပြောင်းတော့ဘူး။ ငါကသက်သေပြခဲ့သည် !!!!!!
အိုင်တီအကုန်လုံးလိုနေပြီ၊ ဘယ်နှစ်ရက်ကြာပြီလဲ။ ရက်ပေါင်း ၉၀ ထက်ပိုသောအရာများသည်အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်တူသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်မှထွက်ခွာသွားသင့်သည်ဟုမဆိုလိုဘဲရက်ပေါင်း ၉၀ အကြာတွင်သင်သည်အမျိုးသမီးထံသို့ချဉ်းကပ်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုလုပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သင့်သည်။
ငါရက်ပေါင်း 90 စောင့်ဆိုင်းပြီးတော့ဖြောင့်ထွက်သွား။ အမှုအရာလှိမ့်ရဖို့ blowjob တယ်။ စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးနှင့်အကြိမ်တစ်ဒါဇင်ထပ်ပေါင်းပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ် ဦး နှောက်သည်စစ်မှန်သောမိန်းမနှင့်လိင်အပျော်အပါးနှင့်စတင်ပေါင်းသင်းလာပြီးကျွန်ုပ်၏ငပဲသည် ပို၍ တုံ့ပြန်လာသည်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ အားလပ်ရက်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ မဟုတ်ရင်မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာမီးစလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသလိုပဲ။ ရက်ပေါင်း ၉၀ သည်ကောင်းကင်ကိုလင်းစေပြီးတောက်ပစေသည်။ ထို့နောက်သင်ကိုယ်တိုင်မဖြစ်ပျက်သောမီးကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းကိုသင်အလုပ်လုပ်ရပြီးတစ်ခါတစ်ရံအရူးကဲ့သို့ဖြစ်ပုံရသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းကမီးမစတော့ဘူး၊ ပြီးတော့မင်းကနေရောင်ထဲမှာထိုင်နေတုန်းမီးကသူ့ကိုယ်သူစဖွင့်မှာကိုစောင့်နေတယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ !!!!!!!!!!!!!!!
LINK - အောင်မြင်သောလိင် - အောင်မြင်မှု
BY - time2change2016
ကန ဦး စာပို့ -
ကိုယ်ပြီးသားကိုဖန်ဆင်းပြီးထပ်မံစတင်ရိုးရှင်းသောစောင့်ရှောက်ဂုဏ်နဖူးတိုင်တွေအများကြီး Deleted ။ အသက်အရွယ်နုပျိုသောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 10 အသက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပေါ် Started, ဖြောင့်နက်နဲအဆုံးသို့ dived ။ အသက် 10 ကတည်းကအမာခံ porn
ကျွန်ုပ်သည်အပျိုစင်ဘ ၀ ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် PIED မတိုင်မှီပါးစပ်နှင့်လက်ဖြင့်ရိုက်ခြင်းနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုမအောင်မြင်ခဲ့သောကြောင့်သူမထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေသည်။ ၅ မိနစ်ခန့်မျှသာသွားခဲ့သော်လည်းအပျိုစင်လိုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်မှာလည်းကြိုးစားမှုမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ငါနှင့်သူမပါနေတဲ့မိန်းကလေးတစ် ဦး ဆိုဖာပေါ်တင်ခဲယဉ်းတဲ့စိုက်ထူမရနိုင်ပါ။ သူမဘေးတွင်ရှိစဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ရသည်။ ငါရပ်လိုက်တာနဲ့ ငါ့ရဲ့စွဲလမ်းနေတဲ့ ဦး နှောက်ကစိတ်မ ၀ င်စားတဲ့အတွက်ငါဘယ်တော့မှမပြောင်းခဲ့ဘူး။
ဒီအဖြစ်အပျက်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုဟာမိုင်ပေါင်းများစွာကျသွားပြီးစိတ်ဓာတ်ကျလာပြီးစွဲလမ်းမှုပိုဆိုးလာတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေသည့် PIED တွင်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူတစ် ဦး ပါ။ ၂၀၁၆ အစောပိုင်းတွင်ရော့ခ်အောက်ခြေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်ထွက်ခွာသွားရန်အလေးအနက်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၆ နှစ်မှစ၍ PIED ရှိခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်၏မိခင်ကိုပင်ပြောကြားခဲ့သည်။